भूकम्पले रोकेन नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरुलाई ! - Himalayan Kangaroo
भूकम्पले रोकेन नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरुलाई !
Posted by Himalayan Kangaroo | ६ कार्तिक २०७३, शनिबार १४:२९ |
काठमाडों । टुँडाल खसे, मन्दिरका मूर्तिहरु ढले । विनाशकारी भुकम्पले विश्व सम्पदा सूचीमा सुचीकृत पाटन दरवारकोसमेत कलात्मक भौतिक संरचनाहरु भग्नावशेषमा रुपान्तरण भए । तर तिनको मोहकता मेटिएन, ती सम्पदाहरुप्रतिको मायामोह र आकर्षण घटेन । पर्यटकहरुका लागि तिनै संरचनाहरु अवलोकन, अनुसन्धान र पुननिर्माणका लागि आवश्यक उपाय अवलम्वनको गतिलो अध्याय बन्न पुग्दा पर्यटकहरुको आवागमनमा वृद्धि भैरहेको छ । वाह्य र आन्तरिक पर्यटकहरुको भीड बढिरहेको छ ।
भूकम्प जाँदाको स्मृति र पुननिर्माणप्रतिको अनेक आशंकावीच स्थानीयहरु अनुत्तरित छन् र फुर्सद भुलाइरहेका छन् सम्पदाको सेरोफेरो । ७० नाघेका यी पाका स्थानीयहरु भूकम्प अघिका मन्दिर र संरचनावारे भलाकुसारीमा व्यस्त छन् । पुरानै स्वरुपमा निर्माण हुने÷नहुने द्विविधा र आशंकाले दैनिकजसो पुननिर्माणका गतिविधिहरु नियालिरहेका छन् ।
पाटन दरवारमा पुननिर्माणमा व्यस्त छन् मजदुर र कलाकर्मीहरु । अर्थात पुननिर्माणले तीव्रता पाएको प्रष्ट देखाउँछ । यिनै कर्म र कर्मशील मानिसहरुप्रति पर्यटकको विश्वास छ । पुननिर्माणको संभाव्यताप्रति ।
अन्य तुलनामा यस सम्पदाको पुननिर्माण तीब्र देखिन्छ । यहाँका अनेक दरवार र क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुननिर्माण सम्पन्न भैसकेको छ भने केहीको शुरुवात भएको छ । त्यसैले त, दरवार भ्रमण गर्नेहरुको भीड उत्तिकै छन् । बढिरहेको छ । स्वदेशी, सार्क राष्ट्र र अन्य मुलुकहरुको गरी असोज महिनामा मात्र पनि १३ हजार बढीले पाटन दरवार संग्राहलयको भ्रमण गरेको तथ्यांक संग्राहलयसँग छ । ललितपुर उपमहानगरपालिका र संग्रहालयको संयुक्त पहलमा शुरुवात भएको एकद्वार टिकट प्रणलीले पनि पर्यटकहरुका लागि सहज भएको संग्रहालयको भनाई छ ।
काष्ठकला, मुर्तिकला र अन्य विविध पौराणिक कलाहरुको अवलोकनका लागि पर्यटकहरुको आवागमन बढिरहेको छ ।
Previousलोकमानसिंहविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे निर्णय गर्न माओवादी डरायो,काँग्रेसको निर्णय कुर्ने
Nextअष्ट्रेलियावासीलाई आइतवार ‘रमाइलो साँझ’मा सन्दिपले हँसाउँने,धमेन्द्र र श्रेयाले नचाउने
२८ पुष २०७३, बिहीबार ०२:२३
निर्मला प्रकरणः थप चारको डिएनए नमूना प्रयोगशालामा
१५ कार्तिक २०७५, बिहीबार ०२:२४
२ मंसिर २०७६, सोमबार ०३:०४
‘रिह्याब’ सेन्टरमा प्रहरीकाे छापा, ५१ युवतीको उद्दार
१३ पुष २०७५, शुक्रबार ०२:३८